भखरै बिहे गरि ल्याएकि श्रीमतिको पहिले नै ८ जना पुरुषसंग बिवाह भैसकेको थाहा पाएपछि | Public 24Khabar
Home Lifestyle भखरै बिहे गरि ल्याएकि श्रीमतिको पहिले नै ८ जना पुरुषसंग बिवाह भैसकेको...
भखरै बिहे गरि ल्याएकि श्रीमतिको पहिले नै ८ जना पुरुषसंग बिवाह भैसकेको थाहा पाएपछि
एक जना महिलाले कति जना पुरुषसँग विवाह गर्लिन, एकजनासँग वा दुईजनासँग । तर एक महिलाले भने विवाहमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेकी छन् ।
एकपछि अर्को गर्दै ती महिलाले ९ जना पुरुषसँग प्रेम विवाह गरिन् । घटना सार्वजनिक भएपछि महिलाका आठौं पतिले प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गरे । प्रहरीले उक्त घटनामा सम्झौताका लागि धेरै प्रयास गर्यो । तर कुरा मिलेन । महिलाले नवौं पतिसँग प्रेम गरेको बताइन् र उनीसँगै हिँडिन् ।
Previous articleएकै मानिसका १३ श्रीमती, ती पनि एकैसाथ ग’र्भवती !
Next articleपाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् कात्तिक ३ गते साेमबारको राशिफल हेर्नुहोस् र ॐ लेखेर सेयर गराै